Kubheja pane yakavhurwa sosi kunoreva kusiya iyo yega yekutengesa zvisirizvo | Kubva kuLinux
Drew DeVault isinjiniya wesoftware uyo anonyora, anochengetedza uye anopa kune emahara uye akavhurika mapurojekiti, kunyanya achishanda paWayland (wlroots & sway), SourceHut, aerc, Alpine Linux, nezvimwe.
Y Mushure mekuchinja kwerezinesi reElasticsearch, haana kumira kuratidza kutsamwa kwake uye mu blog rake akazivisa chinzvimbo chake pane shanduko yemalayisensi muElasticsearch.
“Elasticsearch ndeyavo vanopa chiuru nemazana mashanu nemakumi manomwe nenomwe vanopa, vanochengeta kodzero dzavo uye vakapa marezinesi kuElastic kugovera basa ravo pasina kurambidzwa. Aya ndiwo maburi eElastic anoshandiswa paakasarudza kuti Elasticsearch haichazovhurika sosi, maburi avakaunza nechinangwa chimwe chete kubva pakutanga. Paunenge uchiverenga shambadziro yavo, usanyengerwa nemutauro wavo unotsausa: Elastic haisisiri sosi yakavhurika uye kufamba kunopesana nesosi yakavhurika. Uku hakusi kufamba kwe "kuvhura zvakapetwa." Elastic yakasvipa mate kumeso kweumwe neumwe wevane zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nenomwe uye wese akapa Elastic kuvimba kwavo, kuvimbika uye kuchengetedzeka. Uku ndiko kufamba kunodzikira padanho reOracle.
"Vazhinji veava vakapa vaivepo nekuti vaitenda kune yakavhurwa sosi. Kunyangwe avo vanoshandira Elastic sevashandi vayo, vane kodzero dzavo dzakatorwa kwavari nevavanoshandira, vanoshanda ipapo nekuti vanotenda mune yakavhurika sosi. Ini ndinowanzobvunzwa kuti "ndingabhadharwe sei kuti ndishande munzvimbo yakavhurika", uye imwe yemhinduro dzangu kukurudzira basa kumakambani akaita seElastic. Vanhu vanotarisa kumakambani aya nekuti ivo vanoda kutora chikamu mune yakavhurika sosi.
“Ndinovimba munhu wese ari kuverenga anorangarira ichi seimwezve chidzidzo muunyanzvi hwekusambosaina Contributor License Agreement (CLA). Vhura sosi bhizinesi renharaunda. Iko kuzvipira kunyoresa basa rako mumatare uye kubvumira nharaunda kubatsirwa nazvo pamwe chete, kunyangwe nemari. Vanhu vazhinji vakavaka mabasa uye mabhizinesi kubva kuElasticsearch, yakazvimirira paElastic, uye vaive nekodzero yekuzviita pasi pechibvumirano chakavhurika chemagariro. Kusanganisira Amazon.
"Haisi yako. Wese munhu ndewake. Ichi chikonzero nei yakavhurwa sosi yakakosha. Kana iwe uchida kutamba panhandare yekutamba yeFOSS, iwe unofanirwa kutevedzera mitemo. Kana izvo zvisingakufarire, saka haufarire mahara software. Iwe wakasununguka kugovera software yako zvisinei asi iwe zvaunoda, kunyangwe pasi pedzimba kana yakavhurwa sosi rezinesi mazwi. "Asi kana ukasarudza kuzviita zvemahara software, zvinoreva chimwe chinhu uye une hunhu hwekuremekedza."
Mushure mekubudiswa, Drew DeVault akanyora chinyorwa chechipiri zuva rinotevera rakanzi "Kubheja pane yakavhurwa sosi kunoreva kusiya iyo yega yekutengesa zvisirizvo."
Muchinyorwa ichocho inotaura kuti kutora chikamu mune yakavhurika sosi kunoda kuti iwe "urambe humambo hwako pane zvekushambadzira."
Iyi ipfungwa inonzwisisika nezve yemahara uye yakavhurwa sosi software inoita kunge inotungamira makambani mazhinji kuti arwisane nekunzwisisa kwavo kwemahara software uzivi, uye inofanirwa kugadzirisa yega.
Izvo zvave zvichionekwa mumakore achangopfuura kuti yemahara software iri kuwana pasi mu software pasirese. Chinhu chimwe chete chauchazofanira kubvuma ndechekuti haugone kudzora mukana wekushambadzira wepachena uye wakasununguka sosi software.
"Izwi rekuti" rakavhurika sosi "rinogamuchirwa zvakawandisa sekutsanangurwa kwetsananguro yeyakavhurwa sosi, uye chekutanga chinodiwa ndeichi:
»[Iyo Mitemo YeMahara Software Distribution] haingatadzise chero bato kubva mukutengesa kana kupa software seimwe yehuwandu hwehuwandu hwekuparadzira software ine zvirongwa kubva kwakasiyana kwakasiyana masosi. Iyo rezinesi haidi mari yemubhadharo kana imwe fizi yekutengesa kwakadai.
"Izvi zvinovhara 'OSS' mu 'FOSS'. Iyo "F" inomiririra "yemahara" uye yakafukidzwa neichi chigadzirwa kubva kuFree Software Foundation:
"[Chirongwa chemahara software kana vashandisi vechirongwa vari] vakasununguka kumhanyisa chirongwa sezvavanoda, pachinangwa chipi zvacho, [… uye…] kugovera patsva makopi."
Uyewo, inojekesa chikamu chekutengeserana cherusununguko urwu zvakajeka:
«Yemahara software hazvireve isiri-yekutengesa. Chirongwa chemahara chinofanirwa kuwanikwa chekushandisa mukutengesa, kusimudzira kutengeserana, uye kugovana kwekushambadzira. Ndichine rusununguko rwekuteedzera nekushandura software, [uye] kutengesa makopi. "
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Kubheja pane yakavhurwa sosi kunoreva kupa iyo yega monopoly mukutengesa zvisirizvo
Kubheja pane yakavhurwa sosi ndiko kakita de la vaquita. Nekuti zvinoitika kuti zvinosuruvarisa, chete neakavhurika sosi, hausi kuenda kukona, nekuti iwe unoda madhiraivha eimba yewifi yepc yako kana palaptop, kupfuura chero chinhu chipi zvacho nekuti kana zvisiri, saka iyo wifi, vazhinji wifi vane kodzero vatyairi. Edza kumisikidza yemahara yemahara roll distro senge trisquel uye uone matambudziko auinayo newifi uye nezvimwe zvinhu zvakawanda. Kana iwe ukashandisa nvidia, iwo madhiraivha eimba anoenda kubva ku c * jones uye kunyange Java iyo inobva kuOracle iri nani, zvakaita sekudaro uye runyorwa rurefu. Saka bheji rakachengeteka uye rinoshanda nderazvino, chokwadi, ndinoreva mubatanidzwa wepachivande uine mahara, nekuti zvichave kuti ndezvemabhora uye zvimwe zvese ndezvemombe uye emamuvhi mafirimu.
Izvi zvinoitika nezvinoitika.
Vanhu vanoita kunge vane kusawirirana kumarezinesi senge gnu gpl 2 uye mukuita zvinoratidzwa kuti akakosha kana isu tisingade kuti basa revazhinji ribiwe nemakambani kana vanhu vasina hunhu.
Sa geek saStallman angave, mukupedzisira nguva inoguma ichimuratidzira chairo mune zvese.
Ini ndinopedza kuverenga 2 makomendi uye maziso angu akabuda ropa, kwete chete kubva munzira yavanonyora asiwo kubva pazivo. Ndiri kudzokera kuchikoro chepuraimari, zvinogona kuti vanondidzidzisa kuti kunzwisisa nekunyora kwazvino kwakamira sei.
Enda, Node.js, PHP, Python uye Ruby: 5 Software Development Projects